Soo dejisan RegistryCleanerPro 10.1 – Vessoft
Soo dejisan RegistryCleanerPro
RegistryCleanerPro – software yahay in la kordhiyo xasiloonida iyo xawaaraha nidaamka. Software ayaa si toos ah baadhaa oo hagaajiya ama tirtirtaa entries been ah, madhan oo aan waxtar lahayn in diiwaanka. RegistryCleanerPro ku jira qaybo si ay u falanqeeyaan, defrag iyo dayactiro diiwaanka. Software waxay yaraynaysaa tirada fariisiyo iyo bixisaa shaqo aad u xasiloon nidaam la isticmaalayo arin joogto ah oo qalad diiwaanka.
Helitaanka iyo saxo of entries khaldan ee diiwaanka
Bixisaa entries madhan ama aan waxtar lahayn
Falanqaynta iyo defragmentation ah diiwaanka
Comments on RegistryCleanerPro:
RegistryCleanerPro Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... CCleaner 5.23.5808 Standard, Professional iyo Portable
العربية, English, Українська, Français... Carambis Software Updater 2.3.0.5412 Pro iyo 2.0.0.1322 Standard
English, Українська, Français, Español... IObit Uninstaller 6.0.2.156
Ayna System Software si loo saaro oo aan loo baahnayn faylasha, daro iyo qashin kale ee nidaamka. Software ayaa awood u si meesha looga saaro xogta ka soo diiwaanka iyo soo celinta nidaamka ay dhacdo in shil.
العربية, English, Français, Español... Picasa 3.9.141.259
العربية, English, Українська, Français... SketchUp Make 2016
Graphics iyo design Software ee lagula socdo ee walxaha ku jira qiyaas 3D. User waxay leedahay fursado ah in la dhiso qaybaha kala duwan in ay mashaariic isaga u gaar ah.
Converters Video Tool in edit iyo ka arrinsashada faylasha video. Software The kuu ogolaanayaa inaad si loogu badalo video qaabab loo jecel yahay oo waxay bixisaa tayada image sare.